Umbango womzila ukhiphe izidumbu - Ilanga News
Home Izindaba Umbango womzila ukhiphe izidumbu
Umbango womzila ukhiphe izidumbu
AbeSantaco bathi sebehlele umhlangano ukuze bathole isixazululo
SIMANZONZO isimo eNewcastle, emuva kokuba kwasuka esinamathambo ngoLwesine kutholene phezulu abashayeli bososeshini ababili, bakule ndawo, iMadadeni Taxi Association neBambanani Taxi Association, kubangwa umzila. Kubikwa ukuthi kulesi sigameko kwashona abashayeli ababili okunguCharles Mataki noNjabulo Shezi. Akucaci ukuthi yini inkinga, kodwa ILANGA lihabule ukuthi indaba iqale ngesikhathi onogada abaqashwe yiMadadeni, bevimba izimoto ebezithwele abantu ziyodlula ngasendaweni okuthiwa yise JV, engaphansi komzila waseMadadeni.
AbaseBambanani kuthiwa baya erenki yaseMadadeni, batshela osomatekisi bakhona ukuthi ngoba bayabavimba ukuba badlule e-JV, nabo bazowavimba amatekisi aqhamuka eVryheid nakwezinye izindawo, adlule emzileni wabo. Kuthiwa kube sekuhlanganwa kwavunyelwana ukuthi amatekisi angaphansi kweMadadeni, mawangabe esama endaweni okuthiwa yisePlaza, kodwa ame KwaMlangeni, besekuthi aweBambanani alayishe ukusuke ePlaza athululele kulawa azobe elayisha KwaMlangeni. Umthombo weLANGA uthi indaba isuke ngesikhathi izimoto zase Bambanani seziyothulula KwaMlangeni, zajikijelwa ngamantshe.
“Kubizwe omunye umhlanganokuyokhulunywa lolu daba, okuthe kusalindiwe kwaqhamuka abashayeli beMadadeni sebehamba nonogada babo, kwaqala ukudubula. Kugcine kudubuleka abashayeli ababili, bashona,” kusho umthombo. ILANGA lithole ukuthi le mpi igcine isingenwa nangabashayeli abahamba ngezimoto ezincane ezithutha umphakathi ezibizwa ngamaphela. Bona kuthiwa bebeseka abaseBambanani, kwazise nabo basuka oSizweni. Ngeledlule kuke kwasabalala izithombemnyakazo (videos) ezinkundleni zokuxhumana, kubonakala iqulu labantu lijikijela itekisi ngamatshe.
Kwesinye isithombemnyakazo naso esisabalele ezinkundleni zokuxhumana, sikhombisa inqwaba yabantu ibaleka bese kuzwakaka ukuqhuma kwesibhamu siphindelela. USihlalo weBambanani Taxi Association, uMnu Khumalo (ongathandanga negama lakhe), uvumile ukuthi kukhona ukuhilizisana okube khona, wathi ngoLwesihlanu bazamile ukuhlangana, kwabakhona abangaphumeleli. Uthe ukhona umhlangano onamuhla lapho kuzoxoxwa khona ngalolu daba. Imizamo yokuthola abeMadadeni Taxi Association iphuzile njengoba ucingo lokuthiwa ungusihlalo wakhona, belukhala kodwa lungaphendulwa.
UMnu Shali Mahlaba ongusihlalo weSouth African National Taxi Council (Santaco) esifundeni iMajuba, uthe bawutholile umbiko ngalesi sigameko kanti kunomhlangano ogcine ungaphumelelanga obuhlelwe ukuba ube ngoMgqibelo, obekuhloswe ngawo ukuxazulula lolu daba. “Sihlele ukuba sihlangane namuhla ngoMsombuluko ukuze luzodingidwa lolu daba, sithole nesixazululo. Esisakuzwile nje wukuthi indaba iphakathi kweMadadeni Taxi Association neBambanani Taxi Association,” kusho yena. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa aphenya amacala amabili okubulala.
Previous articleAbazali banovalo ngebhasi “eligcwala kuze kweqe”
Next articleUbufakazi obushaqisayo “ngoshise” iphalamende.